Home » Vaovao momba ny dia an-kolontsaina » Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight, World Telo dia nanambara ny Jura Sea North Curaçao 2019
Curaçao dia nanambara ny anarana voalohany amin'ny andiany fahasivy amin'ny Festival Jazz Sea Curaçao North Sea. Amin'ity taona ity, Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight ary Tontolo Fahatelo no hiseho amin'ny festival amin'ny World Trade Center ao amin'ny Bay Piscadera. Ny fikambanana dia mbola sahirana amin'ireo mpanakanto hafa isan-karazany izay hambara mandritra ny volana ho avy. Hisokatra ny alakamisy 29 aogositra ny festival miaraka amin'ny kaonseritra maimaimpoana an'i Havana D'Primera sy Aymee Nuviola.
Ny tarika amerikana Maroon 5 dia nivarotra rakikira 20 tapitrisa mahery ary nahazo mari-pankasitrahana telo an'ny Grammy. Ny rakikirany voalohany, Songs About Jane, no nanjary zava-bitany lehibe indrindra ary nandimby azy, It Won't Be Soon Before Long, dia nanao tsara kokoa. Be dia be ny fiambenana: Sarotra kokoa ny miaina, ity fitiavana ity, ho tian'ny olona izy, mampanontany tena ahy, mihetsika toa an'i Jagger mampiseho an'i Christina Aguilera… mitohy ny lisitra. Ny rakipeon'izy ireo farany, Red Pill Blues, dia navoaka tamin'ny faran'ny 2017 ary nahitana ny tovovavy mpitovo malaza toa anao toa an'i Cardi B. Tamin'ny volana Janoary lasa teo, ny Maroon 1 dia nahazo voninahitra tamin'ny fampisehoana nandritra ny Super Bowl Half-Time Show.
Juan Carlos Ozuna Rosado, fantatry ny anarany fotsiny Ozuna, dia Reggaeton Puerto Rico ary mpihira fandrika latinina. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2016, Ozuna dia nalaza tamin'ny fisehoany tamin'ny La Ocasión tokana, nitombo hery hatrany hatrizay. Namoaka rakikira roa izy hatramin'izao; Odisea 2017 sy Aura 2018, ary nahazo loka roa tamin'ny Billboard Music Awards ary loka Latin American Music Awards telo, ankoatry ny hafa. Tamin'ny taona 2017, nanao ny laharana voalohany tamin'ny sarimihetsika Que León izy.
Enina taona taorian'ny nanaovany ny laharana voalohany tao Curaçao dia miverina eto amin'ny nosy i 'Empress of Soul' Gladys Knight. Miaraka amin'ny tariny The Pips dia nahitana hira malaza izy, toa ny I Heard It Through The Grapevine, Midnight Train To Georgia, ary Baby Don't Change Your Mind, tamin'ny taona 1960 sy 1970. Tamin'ny faran'ny taona 1980 dia nanomboka ny asany solo-tena i Knight ary nahita fahombiazana teo noho eo niaraka tamin'ny lohateny James Bond mitondra ny lohateny hoe To To Kill. Ny rakikirany farany, Where My Heart Belongs, dia navoaka tamin'ny 2014 ary rakikira filazantsara bona fide, izay nanatontosana The Pips ihany koa. Knight ankehitriny dia manana Grammy fito sy loka maro hafa ho an'ny anarany.
Nankalaza ny faha-45 taonany tamin'ny taon-dasa ny tarika Jamaikana Tontolo fahatelo. Miantso ny tenany hoe 'Reggae Ambassadors' ary mamaritra ny feony hoe reggae fusion, World Third dia mampifangaro ny reggae amin'ny karazany maro hafa toy ny fanahy, funk, ary disko. Ny zava-dehibe nalaza hatramin'izao dia ny 1978's Now That We Love Love. Ny fahombiazan'izy ireo dia nitondra azy ireo nanerana an'izao tontolo izao ary nametraka fanendrena Grammy folo ho an'ny anarany. Ny mpitovo farany azy ireo, Loving You Is Easy, novokarin'i Damian Marley ary navoaka ny fiandohan'ity taona ity.
Ny tarika Kuba Timba Havana D'Primera dia natsangan'i Alexander Abreu tamin'ny 2008, ny tarika dia namorona tarika mpitendry mozika teo amin'ny sehatry ny mozika kiobàna, nahatratra 17 ny isan'izy ireo. Abreu dia raisina ho iray amin'ireo mpitsoka trompetra tsara indrindra tamin'ny androny, ary izy koa dia mahay mpamoron-kira, mpihira ary mpitendry tarika. Ny gadona fusing manerana an'i salsa, jazz, funk ary Afro-Cuba dia namoaka rakipeon-studio efatra hatreto. Ny farany dia ny Cantor Del Pueblo an'ny taona 2018, izay nahazo azy ireo ny fanendrena azy ireo ho an'ny Grammy Latin Best Album Best.
Aymée Nuviola, manana anaram-bosotra hoe 'La Sonera del Mundo', dia mpihira fanta-daza avy any Kiobà izay niofana tao amin'ny Conservatory Manuel Saumell any Havana. Nuviola no iray amin'ireo kintana Kiobàna lehibe indrindra amin'izao fotoana izao, ary nandrakitra hira iray aza niaraka tamin'i Jackson Browne, angano amerikanina. Tamin'ny naha-mpihira tanora Nuviola azy nifindra tany Miami izay niainga tokoa ny asany irery. Tamin'ny taon-dasa dia nandrombaka ny lokany voalohany tamin'ny Grammy Latin ho an'ny rakikirany Como Anillo Al Dedo 2017.
St. Kitts & Nevis dia mirakitra fitomboana tarehimarika indroa mandritra ny roa volana voalohany amin'ny 2019